Imbali yeHula Hoop - Trivia kunye Naphezulu
Imbali yeHula Hoop
I-Round Hoop Toy EyiTebled Around Around the Waist and Limbs for Play okanye Exercise
I-hula hoop yinto eyenziwa mandulo - akukho nkampani yanamhlanje kwaye akukho mvelisi omnye onokuthi angaqulunqa i-hula hoop yokuqala. Enyanisweni, amaGrike aseMandulo ayedla ukusebenzisa i-hoop njengendlela yokuzilolonga.
Iiphuphu ezindala zenziwa kwintsimbi, i-bamboo, imithi, ingca, kunye nemivini. Nangona kunjalo, iinkampani zanamhlanje "zakhiwe kabusha" zabo iinguqulelo ze-hula hoop zisebenzisa izinto ezingavamile, umzekelo; iplastiki i-hula hoops kunye neentsimbi ezongezelelweyo ze-glitter kunye nabasikizi, kunye nama-hoops adibeneyo.
Imvelaphi yegama elithi Hula Hoop
Malunga ne-1300, i-hooping yafika kwi-Great Britain, iinguqu ezenziweyo zetekisi zaziwa kakhulu. Kwiminyaka ye-1800 yokuqala, oomkhumbi baseBrithani baqala ukubona ubungqina be-hula kwiziqithi zaseHawaii. I-Hula ukudansa kunye ne-hooping ibonakala ngokufanayo kwaye igama elithi "hula hoop" lihlangene.
I-Wham-O Iimpawu kunye neePententi zeHula Hoop
URichard Knerr kunye noArthur "Spud" uMelin wasungula inkampani yaseWham-O, eyanceda ukuphakamisa enye ithoyizi yasendulo, i- frisbee .
UKnerr noMelin baqala inkampani yaseWham-O kwigalaji yabo yaseLos Angeles ngowe-1948. La madoda ayethengisa i-slingshot eyaqalwa ekuqaleni ukuqeqeshwa kwezilwanyana zezilwanyana kunye neenkwenkwezi (zambisa inyama kwiintaka). Le slingshot ibizwa ngokuba yi "Wham-O" ngenxa yesandi esenziweyo xa ithagethi. UWham-O waba negama le nkampani.
U-Wham-O uye waba ngumenzi ophumeleleyo kunabo bonke ama-hula hoops kumaxesha anamhlanje. Bathengisa igama elithi Hula Hoop® baza baqalisa ukuvelisa itekisi kwiplastiki entsha yePlastiki ngo-1958.
Ngo-Meyi 13, 1959, u-Arthur Melin wafaka isicelo segunya lobunikazi be-hula hoop. Ufumene iNombolo yePententi ye-US 3,079,728 ngoMatshi 5, 1963, kwiHoop Toy.
Izigidi ezingama-20 ze-Wham-O iHla hoops zithengiswa nge $ 1.98 kwiinyanga ezintandathu zokuqala.
IJapane sele ivinjelwe i-hula hoop ngenxa yokuba isenzo se-hip ejikelezayo sibonakala singcolile.
NgoJuni 4, 2005, u-Australia wase-Australia u-Kareena Oates wabeka i- Guinness irekhodi yehlabathi ye-hula hooping-ne-hoops ezili-100 zezinto ezintathu ezihlaziyiweyo.
Ama-hoops angama-101 ahlaselwa ngu-Alesya Goulevich waseBelarus ngoJuni 11, 2006
Ihoops ezili-105 zahlonywa nguJin Linlin waseChina ngo-Oktobha 28, 2007.
Ingxelo yehlabathi yeHula Hoop enkulu (nge-circumference) i-spun yabekwe ngu-American Ashrita Furman kwi-51.5 kwi-Juni 1, 2007.
I-Flying Shuttle kunye noJohn Kay
Imbali ye-A-to-Z yeMathematika
Iigumbi zendlela yeCat ye-Eye - uPercy Shaw
Ngubani owafaka iClecake?
Amanyathelo aseMerika aseMelika
Imbali yeLwimi yoLwimi lwe-BASIC
Indlela Yomnxeba Osebenza ngayo
Imbali ye-Automobile: I-Assembly Line
Inkcazo ye-Atomic yeSilicon: I-Silicon Molecule
Edwin Land kunye nePolaroid Photography
Udliwano-ndlebe: UMichael Caine Uthetha 'I-Dark Knight' kunye neJoker kaHeath Ledger
Ukwamkela iYunivesithi yase-St.
I-Raleigh Sports yesiNgesi i-3-speed speed
I-German Preposition 'Bei'
Ngaba Unokubuyisela kwakhona iPlastiki Lids kunye neCape Bottle?
Ukuguqulwa kweMelika: Imfazwe ihambela eMzantsi
Ngaphambi kokuba uthenge iPiano yakho yokuqala
UNathaniel Alexander kunye noSihlalo oPholayo
IProfayili Yomculi Weetyhefu
Ivesi ZeBhayibhile Ngomsebenzi
Ingxabano yeS SLOSS
Iincwadi ezili-17 eziphezulu kwiMfazwe Yehlabathi I
Nguwuphi umThetho wokuPhinda ukuThathela iziganeko ezizimeleyo?
Inqaba kunye neKhedhedral Emva kokuzamazama komhlaba
I-Novena kuMoya oyiNgcwele
Romeo noJuliet: i-Romeo's Monologue
Uludwe lwe-Obama Gun Control Measures